प्रदेश तीनको स्थायी राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती कायम (भिडियो सहित) « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
प्रदेश तीनको स्थायी राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती कायम (भिडियो सहित)
धुलिखेल, २७ पुस: प्रदेश ३ स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती कायम भएको छ । आइतबार बिहान प्रदेश नं. ३ को प्रदेशसभा बैठकले दुई तिहाइ मतका साथ अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई स्थायी कायम गर्ने प्रस्ताव पास गरेको हो ।
राजधानी हेटौंडा राख्ने प्रस्तावको पक्षमा भएको मतदानमा १०५ सांसदले पक्षमा मतदान गरे । ३ सांसदले भने हेटौंडा स्थायी राजधानी बनाउन नहुने पक्षमा मत जायर गरेका थिए । प्रदेशको नाम वागमती राख्न सहमत भएको विवेकशील साझा पार्टीले भने स्थायी राजधानी काभ्रेको धुलिखेल प्रस्ताव गरेको थियो । तर धुलिखेललाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको छ । काभ्रेबाट निर्वाचिन ५ जना सांसदहरुले काभ्रेकै विपक्षमा मतदान गरेका छन ।
त्यस्तै नाममा भने १०८ जना सांसदले सहमति जनाएका छन । प्रदेशसभाका ११० सिटमध्ये सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मतदान गरेनन् भने नयाँशक्तिबाट निर्वाचित तर पछिल्लो समय स्वतन्त्र रहेका सांसद् प्रेम तामाङ मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित थिए । उनको प्रदेशको नाम नेवा ताम्सालिङ राख्ने प्रस्तावमा समर्थक समेत नपाएपछि प्रक्रियामा सहभागी नभएका हुन् । राजधानीबारे टुंगो लागेपछि प्रदेशसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो ।